Tahin’i Jehovah Izay Manaiky ny Asa Ampanaoviny | Olive Matthews
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Notantarain’i Olive Matthews
Nisy asa nila natao, dia niteny izahay mivady sy ny zokiko lahy sy ny vadiny hoe: “Izahay mazoto!” Nahoana izahay no nanaiky hanao an’ilay izy, ary inona no fitahiana nomen’i Jehovah anay? Aleo aloha hotantaraiko ny mombamomba ahy.
TAMIN’NY 1923 aho no teraka, tany Hemsworth, tanàna any Yorkshire, any Angletera. Nanana zoky lahy atao hoe Bob aho. Tamin’izaho sivy taona teo ho eo, dia nahazo boky nampiharihary ny zavatra diso ampianarin’ny fivavahana i Dada. Tena nampiaiky azy ny zavatra novakiny tao. Izy koa efa tsy tia mpitondra fivavahana rahateo satria mihatsaravelatsihy, hono, ry zareo. Nitory taminay i Bob Atkinson, taona vitsivitsy tatỳ aoriana. Nampihainoiny lahatenin’ny Ranadahy Rutherford tamin’ny grafofaonina izahay. Tonga dia fantatray hoe avy amin’ilay fikambanana namoaka an’ireo boky azon’i Dada ilay izy. Nasain’i Dada sy Neny nisakafo tany aminay àry ny Ranadahy Atkinson isaky ny hariva, ary nametrahanay fanontaniana be dia be. Nasainy nanatrika fivoriana tany amin’ny tranon’ny ranadahy iray tsy lavitra anay izahay. Tonga dia nandeha izahay, dia lasa nisy fiangonana kely tany Hemsworth. Nampiantrano mpiandraikitra ny faritra izahay tsy ela taorian’izay, ary nasainay nisakafo ny mpisava lalana teny akaiky teny. Tena nisy vokany tsara tamiko ny fiarahana tamin’izy ireo.
Nanomboka nanao raharaham-barotra izahay tamin’izany, nefa hoy i Dada tamin’i Bob anadahiko: “Raha te hanao mpisava lalana ialahy, dia hajanontsika ity.” Nanaiky i Bob. Nanao mpisava lalana izy tamin’izy 21 taona, ary tsy nipetraka tao aminay intsony. Nanao mpisava lalana koa aho roa taona taorian’izay, tamin’izaho 16 taona. Rehefa faran’ny herinandro aho matetika vao nana-namana, dia karatra fitoriana sy grafofaonina no nampiasaiko. Nampian’i Jehovah anefa aho, ka natao batisa ny vehivavy iray nampianariko. Maro tamin’ny fianakaviany koa no lasa mpanompon’i Jehovah. Voatendry ho mpisava lalana manokana aho ny taona nanaraka, ary i Mary Henshall no namako. Nalefa tany Cheshire, tany amin’ny faritra mbola tsy nitoriana mihitsy, izahay.
Nafotaka ny Ady Lehibe II tamin’izany, ka nasaina nanampy koa ny vehivavy. Tsy nampandraisina anjara ny mpitory teny tao amin’ny fivavahana hafa, dia nanantena izahay hoe hatao hoatr’izany koa satria mpitory manontolo andro. Tsy nanaiky anefa ny fitsarana ka voaheloka higadra iray volana aho. Feno 19 taona aho ny taona nanaraka, ary nangataka tsy hanao miaramila satria tsy mety amin’ny eritreritro izany. Indroa nampakarina fitsarana aho vokatr’izany. Tsy noraharahain’ny fitsarana anefa ny fiampangana ahy, dia afaka madiodio aho. Tena nanampy ahy ny fanahy masina, ary nitantana ahy koa i Jehovah ka lasa be herim-po sy tsy nivadika aho.—Isaia 41:10, 13.
NAHAZO NAMANA VAOVAO
Tamin’ny 1946 izaho sy Arthur Matthews no nihaona. Nigadra telo volana izy satria tsy nety nanao miaramila. Nankany Hemsworth tany amin’i Dennis zandriny lahy izy raha vao vita ny saziny. Mpisava lalana manokana i Dennis. Mbola kely izy roa lahy dia efa nampianarin’ny dadany momba an’i Jehovah, ary natao batisa tamin’izy ireo mbola tovolahy. Voatendry ho any Irlandy anefa i Dennis tsy ela taorian’izay, ka lasa tsy nisy namana i Arthur. Mpisava lalana tena nazoto niasa izy. Nahafinaritra an’i Dada sy Neny ny toetrany, dia nasain-dry zareo hipetraka tao aminy izy. Izahay sy Arthur foana no nanolo-tena hanasa vilia, rehefa nitsidika an-dry zareo aho. Nifanoratra izahay tatỳ aoriana. Nigadra telo volana indray izy tamin’ny 1948. Nivady izahay tamin’ny Janoary 1949, ary nanapa-kevitra fa hanompo manontolo andro foana raha mbola azo atao. Nikarama nioty voankazo izahay rehefa vakansy, dia niezaka ny hahay hitantam-bola. Notahin’i Jehovah izahay ka afaka nanao mpisava lalana foana.
Tany Hemsworth taoriana kelin’ny mariazinay, tamin’ny 1949
Nasaina ho any Irlandy Avaratra izahay, herintaona teo ho eo tatỳ aoriana. Tany Armagh aloha izahay, ary avy eo tany Newry. Katolika ny ankamaroan’ny olona tany, ary tena tsy tia fivavahana hafa. Nila nitandrina tsara sy nahay nanavaka àry izahay rehefa nitory. Tany an-tranon’ilay mpivady izay ny fivoriana no natao, tany amin’ny 16 kilaometatra niala teo aminay. Valo teo ho eo ny mpanatrika. Nasain-dry zareo nijanona tany izahay indraindray, ary tamin’ny tany no natory. Nazoto homana erỳ izahay ny ampitso marainan’iny. Mahafinaritra fa efa betsaka Vavolombelon’i Jehovah izao any.
Nanatrika fivoriamben’ny vondrom-paritra tany Belfast niaraka tamin’i Bob sy Lottie vadiny izahay mivady, tamin’ny 1952. Mpisava lalana manokana tany Irlandy Avaratra ry zareo tamin’izany. Nisy ranadahy tsara fanahy nampiantrano anay. Niaraka taminay tao koa i Pryce Hughes, mpikarakara ny biraon’ny sampan’i Grande-Bretagne. Niresadresaka momba an’ilay bokikely vaovao hoe Lalan’ny Fitiavana ny Lalan’Andriamanitra izahay indray alina. Natao ho an’ny mponin’i Irlandy ilay izy. Nilaza ny Ranadahy Hughes fa sarotra be ny mitory amin’ny Katolika any amin’ny Repoblikan’i Irlandy. Noroahina tao amin’ny tranony ny ranadahy tany. Nampirisihin’ny pretra hanafika azy ireo koa ny olona. Hoy ny Ranadahy Hughes: “Hisy ezaka manokana hatao mba hizarana an’ilay bokikely eran’i Irlandy, ka mila mpivady manana fiara isika hanao an’ilay izy.” * Niteny avy hatrany izahay hoe: “Izahay mazoto!” Izay ilay noresahiko tamin’ny voalohany.
Izahay samy mpisava lalana, nandeha môtô misy fiarakely
Nisy rahavavy nantsoina hoe Bebe Rutland tao Dublin. Efa ela izy no nanompo an’i Jehovah, ary tena tia nampiantrano mpisava lalana izy. Nijanona kely tao izahay, ary namidinay ny fanananay sasany. Nanana môtô nisy fiarakely i Bob, dia nitaingina an’ilay izy izahay efatra ary nandeha nitady fiara. Nahita fiara iray efa niasa izahay, ary mbola tsara ilay izy. Niangavianay ilay mpivarotra mba hanatitra an’ilay izy tany aminay, satria tsy nisy nahay nitondra fiara izahay. Nianatra namindra vitesy teo am-pandriana i Arthur ny harivan’iny. Nanandrana namoaka an’ilay fiara avy tao amin’ny garazy izy ny ampitso maraina. Tamin’izay no tonga i Mildred Willett, rahavavy misionera izay lasa vadin’ny Ranadahy John Barr. Nahay nitondra fiara izy, ary nampianariny i Arthur. Nianatranatra teo izahay, dia vonona amin’izay.
Ilay fiaranay sy ilay tranofiaranay
Nila trano koa izahay efatra. Nisy niteny taminay hoe aza tranofiara no ipetrahana, fa mety hodoran’ny mpanohitra ilay izy. Tsy nety nahita trano anefa izahay, dia natory tao anaty fiara ny alin’iny. Tranofiara kely izay no mba hitanay ny ampitso, ary izay no lasa tranonay. Nisy fandriana kely ambony ambany tao. Nahagaga fa tsy naninona anay ny tantsaha rehefa napetrakay teny amin’ny taniny ilay tranofiara. Tsara fanahy ry zareo. Tonga hatrany amin’ny 16 ka hatrany amin’ny 24 kilaometatra izahay rehefa nitory. Rehefa niverina izahay vao nitory teo amin’ilay tanàna nametrahanay an’ilay tranofiara.
Voatsidikay daholo ny trano tany atsimoatsinanan’ny Repoblikan’i Irlandy, ary tsy nahita olana mihitsy izahay. Bokikely 20 000 mahery no voazaranay, ary nalefanay tany amin’ny biraon’ny sampan’i Grande-Bretagne ny anaran’ny olona liana. Tena faly izahay hoe misy Vavolombelon’i Jehovah an-jatony any izao.
TANY ANGLETERA SY EKOSY
Voatendry ho any atsimon’i Londres izahay tatỳ aoriana. Vao tonga herinandro vitsivitsy izahay, dia niteny tamin’i Arthur ny biraon’ny sampan’i Grande-Bretagne hoe voatendry hanao ny asan’ny faritra izahay ka ny ampitson’iny dia hanomboka. Niofana herinandro izy, dia lasa tany Ekosy izahay. Tsy nanam-potoana nanomanana lahateny akory i Arthur. Tena nampahery ahy anefa ny nahita hoe vonona hanao an’izay nampanaovina azy izy, na sarotra aza ilay izy. Nahafinaritra be ny asan’ny faritra. Faly be izahay satria tafaraka tamin’ny ranadahy sy rahavavy be dia be. Faritany mbola tsy nisy mpitory foana mantsy no niasanay talohan’izay.
Nisy fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy noraisinay tamin’ny 1962. Voasa hanao Sekolin’i Gileada i Arthur, ary haharitra folo volana ilay izy. Nekenay ilay izy na dia tsy maintsy nisaraka aza izahay. Lasa tsy nana-namana aho, ka notendrena ho mpisava lalana manokana tany Hemsworth. Rehefa niverina i Arthur herintaona tatỳ aoriana, dia voatendry hanao ny asan’ny vondrom-paritra tany Ekosy sy tany avaratr’i Angletera ary Irlandy Avaratra izahay.
FANENDRENA VAOVAO TANY IRLANDY
Voatendry ho mpikarakara ny sampana tany amin’ny Repoblikan’i Irlandy i Arthur tamin’ny 1964. Nahafinaritra be anay ny asa fitetezam-paritany, ka natahotra be an’ilay fiovana aho. Tsapako anefa izao hoe tena tombontsoa ny manompo ato amin’ny Betela. Tahin’i Jehovah foana ianao, raha ekenao ny asa ampanaoviny anao, na dia tsy tena mazoto hanao an’ilay izy aza ianao. Niasa birao aho, nikarakara boky halefa any amin’ny fiangonana, nahandro, ary nanadio. Sady nanao ny asan’ny vondrom-paritra koa izahay indraindray, dia afaka nifankahalala tsara tamin’ny mpiara-manompo eran’i Irlandy. Natao batisa koa ny olona sasany nampianarinay. Tena faly izahay fa lasa akaiky be an’ireo mpiara-manompo.
FOTOANA NIAVAKA TANY IRLANDY
Tany Dublin no natao ny fivoriambe iraisam-pirenena voalohany tany Irlandy, tamin’ny 1965. * Nisy fanenjehana mafy tamin’izay, nefa vita soa aman-tsara ilay izy. Nisy 3948 no nanatrika ary 65 no natao batisa. Ranadahy sy rahavavy 3 500 avy any an-tany hafa no tonga, ary nandefasan’ny biraon’ny sampana taratasy fisaorana daholo izay nampiantrano azy ireo. Ireo olona nampiantrano indray nidera an’ireo mpiara-manompo noho ny fitondran-tena tsaran’izy ireo. Fotoana niavaka tany Irlandy tokoa ilay fivoriambe.
Arthur miarahaba tonga soa an’i Nathan Knorr, tamin’izy tonga hamonjy an’ilay fivoriambe tamin’ny 1965
Arthur, mampandre ny fivoahan’ilay hoe Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly amin’ny teny galoà, tamin’ny 1983
Ny biraon’ny sampan’i Dublin no lasa niandraikitra ny faritra atsimo sy avaratr’i Irlandy nanomboka tamin’ny 1966. Tsy mba miray saina hoatr’izany ny ankamaroan’ny olona ao amin’ilay nosy, fa voazarazaran’ny politika sy ny fivavahana. Tena faly izahay nahita Katolika maro be nanaiky ny fahamarinana ary manompo an’i Jehovah miaraka amin’ireo ranadahy sy rahavavy Protestanta taloha.
NIOVA TANTERAKA NY ASAKO
Niova tanteraka ny fiainanay tamin’ny 2011. Natambatra ny sampan’i Grande-Bretagne sy Irlandy, dia voatendry nankatỳ amin’ny Betelan’i Londres izahay. Izaho anefa tamin’io nanomboka nanahy momba an’i Arthur, satria voan’ny aretin’i Parkinson izy. Maty izy tamin’ny 20 Mey 2015 rehefa avy niaraka nandritra ny 66 taona izahay.
Nalahelo be sy kivy lava aho tao anatin’izay taona vitsivitsy lasa izay. Raha mba teo izao i Arthur, dia ho nanampy ahy hoatran’ny fanaony hatramin’izay izy. Lasa akaiky kokoa an’i Jehovah anefa ianao, rehefa misy zavatra hoatr’izany manjo anao. Faly be koa aho fa tena tian’ny olona i Arthur. Naharay taratasy avy any amin’ny namako any Irlandy sy Grande-Bretagne aho, ary nisy aza avy any Etazonia. Mampahery ahy koa i Dennis, rahalahin’i Arthur, sy Mavis vadiny, ary Ruth sy Judy, zanak’i Bob.
Tena manampy ahy tsy ho kivy ny Isaia 30:18, hoe: ‘Mbola manantena ny hiantra anareo ihany i Jehovah, ka hitsangana mba hamindra fo aminareo. Fa Andriamanitry ny rariny i Jehovah, ka sambatra izay rehetra miandry azy.’ Faly aho mahalala hoe efa te hamaha ny olana rehetra i Jehovah sady te hanome antsika asa mahafinaritra ao amin’ny tontolo vaovao.
Tena hitako hoe nitarika sy nitahy ny fitoriana tany Irlandy i Jehovah. Tombontsoa be ny hoe mba nandray anjara kely tamin’ny fampandrosoana ny asany. Tena tahin’i Jehovah foana isika rehefa manaiky an’izay asainy atao.
^ feh. 12 Jereo ny Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 1988 (frantsay), pejy 100-102.
^ feh. 22 Jereo ny Diary 1988 (frantsay), pejy 109-112.